I-China Silicone (engangeni manzi) inqwaba yemichilo yesimo sezulu Ukukhiqiza kanye Nemboni |I-JYD
I-Silicone (engangeni manzi) inqwabelanisa imicu yesimo sezulu
Ukusebenza okuhle okungangeni manzi nokulwa ne-uv
Thumela i-imeyili kithi Amasampula wamahhala
Isisekelo ububanzi: 4 ~ 40mm
Ukuphakama kwenqwaba: 3 ~ 7mm
I-1.Imicu yesimo sezulu yohlobo lweSilicone iboshwe nge-silicone ukuze ixoshe amanzi futhi iqinisekise ukumelana nemisebe ye-UV.Impilo ende yesevisi.
2.Isetshenziswa emafasiteleni nasezicabheni ukuze kuthuthukiswe ukonga kwamandla ngokuvala izikhala nokuvuza okuvumela ukungena komoya wangaphandle, nomoya onesimo esingaphakathi ukuba uphume.
I-3.Impahla Yekhwalithi Ephezulu - Yenziwe ngezinto ezinobungani bemvelo, ibhulashi likhulu futhi lithambile, ukungqubuzana okuphansi, akukho msindo, akukho ukuguqulwa, kunokumelana okuqinile.
4.Ukusebenza okuhle kakhulu: umnyango we-seal strip unezinto eziningi, njengekhono lokuvikela umsindo, ikhono lokuvikela uthuli, nekhono lokumelana nesimo sezulu;Futhi, lo mdwebo wophawu lwesicabha sezulu womnyango awuhambisani nokushayisana, futhi ungafakwa eminyango yengilazi noma emafasiteleni ukuze kuncishiswe umonakalo odalwe ukushayisana.
Umbala: Black, Gray, White, Brown
I-100-200m kumqulu owodwa, ama-4-8rolls ibhokisi ngalinye, amabhokisi angama-370 esitsheni esisodwa esingama-20ft, amabhokisi angama-750 esitsheni esisodwa esingama-40ft
Imininingwane Yokulethwa: Izinsuku eziyi-10-18 ngemuva kokuqinisekisa i-oda futhi ukhokhele idiphozithi
Q: ODM futhi OEM inganikelwa?
A: Yebo.Sanikela.Kudlula amakhathoni angu-200, kumahhala.Uma inani lingeqi amabhokisi angama-200, imali izokhokhiswa.Ngemuva kokuthi amabhokisi angama-200 eqoqwe, izindleko zidonswa ku-oda elilandelayo.
Umbuzo: Zingaki izinsuku ozoqeda i-oda lami?
A: Sinezimboni ezine.Ngakho-ke singavumela izimboni ezine ukuthi zikhiqize i-oda lakho ndawonye.20GP Phakathi nezinsuku ezingama-20.40GP/40HQ zingakapheli izinsuku ezingama-30.
Q: Ungakwazi ukunikeza isampula?
A: Yebo.Singanikeza isampula yamahhala.Uma sinosayizi ofanayo esitokweni, sizokuthumelela usayizi owadingayo kanye nabanye osayizi esibatusile.Uma singenaye usayizi ofanayo esitokweni, sizokuthumelela usayizi ofanayo noma uhlobo.Ungahlola ikhwalithi kuqala.
Q: Yiliphi inani elincane le-oda?
A: Uma usayizi ungusayizi ojwayelekile, njengo-5 * 6mm, 7 * 5mm njll., i-MOQ ingu-5,000m.Uma usayizi kungewona usayizi ojwayelekile, njengo-40*12mm njll., i-MOQ ingu-20,000m.
Imininingwane Yokupakisha:Ukupakisha ngebhokisi lephepha, ukupakishwa kwe-roller ngesikhwama sepulasitiki, bese kufakwa ekhathoni
Imiqulu emi-4/ibhokisi, amamitha angama-250/roll
Itheku:SHENZHEN SHANGHAI GUANGZHOU
Usayizi wephakheji elilodwa: 54 * 28 * 42 cm
Isisindo esisodwa esiphelele: 5-8kg
Okwedlule: Iwindi lentengo ye-JYD Factory & nekhabethe lezingubo Ezizinamathiselayo Seals Ukukhumula Isimo Sezulu
Olandelayo: Uhlobo lwe-Silicone
Singumkhiqizi osebenza kahle womnyango newindi sezulu strip, singanikeza amanani angcono kakhulu kanye nekhwalithi enhle, sinezimboni ezine ezingakwazi ukulethwa ngesikhathi.
2. Ukubonisana nge-inthanethi.
1. Imiyalo yokufaka.
2.Isikhathi seshelufu somugqa wesimo sezulu esingenziwe i-sililic yiminyaka engu-1-3 ngaphandle kokupakisha kanye nonyaka ongu-1 ngemva kokukhipha;
Impilo yeshelufu yomugqa wesimo sezulu owenziwe i-sililic yiminyaka emi-3-5 ngaphandle kokupakisha kanye neminyaka emi-2 ngemuva kokuqaqa.
3. Umbuzo wakho uzophendulwa emahoreni ama-2.
Q: Ingabe uyinkampani yokuhweba noma umkhiqizi?
A: Ngokuvamile kuba yizinsuku ezingu-5-10 uma izimpahla zisesitokweni.noma yizinsuku eziyi-15-20 uma izimpahla zingekho esitokweni, ngokuya ngenani.
Q: Uyawahlinzeka ngamasampula?imahhala noma ingeziwe?
A: Yebo, kumahhala.
Q: Ungaqinisekisa kanjani ikhwalithi?
A: Ithimba lonjiniyela abanolwazi nokulawula ikhwalithi okuqinile.Uma uhlangabezana nenkinga yekhwalithi,
sithembisa ukushintsha izimpahla noma ukubuyisela izimali zakho.Imikhiqizo ivunywe yi-SGS, ISO9001.
Q: Angizitholi ngifuna, ungakwazi OEM kimi?Kuthiwani ngenani elincane le-oda?
A: Yebo, singabakhiqizi be-OEM abaqeqeshiwe abangaphezu kweminyaka engama-20, sinekhono elikhulu lokudla kwakusihlwa, kodwa asilokothi senqabe ama-oda amancane, i-MOQ ingaba amamitha angu-5000.
I-Factory Wholesale Wool Pile Weather Strip ye-D...
Ikhwalithi ephezulu yenqwaba yoboya besimo sezulu be-strip uboya Custo...
Amasampula azo zonke izinhlobo zemichilo yesimo sezulu eyinqwaba
4*6 inqwaba ye-silicone shayela i-weatherstripping
2fins 7*6mm inqwaba yemicu yesimo sezulu ye-silicone
5*18mm imicu yezulu yenqwaba emnyama